नेपाल आज | जसपाको एउटा समुह ओलीसंग जाने तयारी , समाजिक संजालमा कार्यकर्ता बिच विवाद उत्कर्षकमा
जसपाको एउटा समुह ओलीसंग जाने तयारी , समाजिक संजालमा कार्यकर्ता बिच विवाद उत्कर्षकमा
आइतबार, ०५ बैशाख २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
जनता समाजवादी पार्टी जसपामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसंग सत्तासाझेदार गर्ने कि नगर्ने बेला विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यो विवाद अहिले कार्यकर्ताहरु तह सम्म पुगेका छन । एक अर्का नेताहरुकोलाई लक्षित गर्ने टिका टिप्पणीहरु समाजिक संजालमा सुरु भएको छ ।
संघीय प्रतिनिधि सभामा जसपाका ३४ सांसद छन । जसमा दुई जना निलम्बीत छन । बांकी ३२ सांसद मध्ये पुर्व राष्टिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित १६ र पुर्व समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित १६ जना छन । जसपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि केही सांसद उपेन्द्र यादवका पक्षमा रहेका छन भने केही सांसद महन्थ ठाकुरको पक्षमा रहेका छन । तर स्रोतका अनुसार बहुमत महन्थ ठाकुरकै पक्षमा देखिएको छ । अहिले पार्टीमा दुई लाइन अन्र्तव्दन्दको प्रभाव तल्लो कमिटी सम्म परेको छ । पार्टी भित्रको विवाद समाजिक संजालमा समेत देखिन थालेका छन । प्रदेश नम्बर २ का भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री यागेन्द्र यादवले समाजिक संजाला लेखेका छन “ओली सरकारले बिश्वासको मत गुमाई सकेको छ, मा.महन्थ ठाकुर र मा.राजेन्द्र महतोले जति जोगाउन खोजे पनि सम्भव छैन । कर्णाली प्रदेशबाट पाठ सिके हुन्छ । ”त्यसैगरि उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण राज्य मन्त्री सुरेश मण्डलले राज्यमन्त्री रायले लेखेको आफनो धारणा प्रति घुमाउरो शैलीमा आलोचना गर्दै पार्टी जहिले नि मधेसको पक्षधर रहेको बताएका छन । समाजिक संजालमा लेखेका छन “मधेसी जनताको भोटमाथी गैरमधेसीले रजाई गर्ने दिन गए । जसपा नेपालको आधारशिला मधेसी जनता नै हुन ।” प्रदेश नम्बर २का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका स्वकिय सचिव जितेन्द्र यादव प्राय जसो जसपाका महन्थ ठाकुरको विरोधमा समाजिक संजालमा लेख्दै आएका छन । यादवले समाजिक संजालमा लेखेका छन “वर्तमान परिस्थितिलाई समेत नबुझी महन्थ ठाकुर जी ले के. पि. शर्मा वोलीलाई सत्ता टिकाउन किन्न ललाहित छन त ?
त्यसैगरि भुमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले पार्टी भित्रको विवादको वारेमा आफनो धारणा समाजिक संजालमा लेख्दै पार्टीलाई फुटाबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन । उनले समाजिक संजालमा लेखेका छन केही साथीहरूलाई जसपा फुटको हतारो भएको छ,
हतार नगर्नुस फुटको पिडा हामिले भोगेका छौं र विभाजित शक्तिहरुको हश्र पनि हेरेका छौ ।
त्यसैगरि जसपाका प्रदेश सभा सदस्य विक्की यादवले अहिले समाजिक संजालमा व्यक्त भईरहेको अभिव्यक्ति राजनितिक आचरणले पनि ठिक नभएको बताए । उनले समाजिक संजालमा लेखेका छन केही राज्य मन्त्रीहरुलाई संस्कार सिकाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले समाजिक संजालमा र्पाी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओली विवाद
८० हजारको लोभलाग्दो विज्ञको जागिर छोडेर सुनिता किन आईन राजनीतिमा ?
बुधबार, १४ बैशाख २०७९
बालेनको भोटसँगै यसरी वढ्दैछ कार्यकर्ताको अराजक्ता, प्रतिस्पर्धिको मानमर्दन
केशव स्थापित र सिर्जनाको मत जोड्दा पनि बालेन अगाडि
भरतपुरमा यस्तो छ पछिल्लो अपडेट, सदर/वदरको विवादले केही समय गणना रोकियो
लुम्बिनीमा जव मोदीले नेपालीमा भाषण ठोके...
सोमबार, ०२ जेठ २०७९